Baseus 360 Phone holder for car အား ကမာရွတ် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
Baseus 360 Phone holder for car
Baseus 360 ကား ဖုန်းထောက်တံ
Rocket မှ Baseus ကား ဖုန်းထောက်တံကို ရောင်းချပေးနေပြီ
360 လှည့်လို. ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မှန်မှာ ဖြစ်စေ၊ ကားရှေ.ဘောင်မှာ ဖြစ်စေ
လွယ်ကူစွာ ထားသုံးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ် စားပွဲမှာလည်း ထားသုံးနိုင်ပါတယ်။
ဘောင်ပေါ်မှာက Double Tape နဲ. ဖြစ်ပြီး
ဖုန်းကိုတော့ သံလိုက်နဲ ချိတ်သုံးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
AC အပေါက်နဲ မသုံးချင်သူများအတွက်
ကားမှာ GPS ကြည့်ချင်သူများအတွက်
10000 kyats (Delivery free in Yangon) (Baseus ဖုန်းထောက်တံ)
7000 kyats (Air con box မှာ တွဲသုံးတဲ ဖုန်းထောက်တံ)
အမည်: Baseus 360 Phone holder for car